कोटेश्वरको जाम हटाउन यसरी हुँदै धमाधम काम, मन्त्री नेम्वाङ आफैँ सडकमा, ८ लेनको बन्दै सडक ! | Public 24Khabar
Home News कोटेश्वरको जाम हटाउन यसरी हुँदै धमाधम काम, मन्त्री नेम्वाङ आफैँ सडकमा, ८...
कोटेश्वरको जाम हटाउन यसरी हुँदै धमाधम काम, मन्त्री नेम्वाङ आफैँ सडकमा, ८ लेनको बन्दै सडक !
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ढोरपाटनका बाढी प्रभावितहरुलाई आज राहत सामग्री प्रदान गरेका छन्। उनले ढोरपाटन नगरपालिका–९ सुप्राङको बाढीग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन समेत गरे। गृहमन्त्री थापासहित बागलु ङ–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेल लगायतको टोली राहत सहित ढोरपाटन पुगेको थियो ।
बाढीले घरबास गुमाएका परिवारलाई तत्काल आवश्यक पर्ने त्रिपाल, टेण्ट, म्याट लगायतका सामग्री वितरण गरिएको हो । राहत वितरण पछि बोल्दै गृहमन्त्री थापाले बाढी प्रभावितहरुको राहत र पुनःस्थापनामा सरकारले सघाउने बताएका सासंद् पौडेलले जानकारी दिए । “जनताको दुःखमा सरकार साथै रहेको उल्लेख गरेका छन्”, उनले ।
गृहमन्त्री थापाले बाढीमा परी ज्या’न गु’माएका व्यक्तिका परिवारलाई सरकारले रु. दुई लाखका दरले राहत प्रदान गर्ने बताएका छन् । यस्तै पूर्णरुपमा क्ष’ति भएका घरको पुनः निर्माणका लागि रु. तीन लाख सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए सांसद् पौडेलले बताए । उनले बाढीले क्ष’तिग्रस्त बनाएको सालझण्डी–ढोरपाटन सडकको मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने बताए ।
उनले बाढीले सडक, पुललगायत भौतिक संरचनामा समेत ठूलो क्ष’ति पुगेकाले तिनको पुनःनिर्माणमा सबैको हातेमालो चाहिने उल्लेख गरे । ढोरपाटन नगरपालिका लगायत अन्य सङ्घसंस्था, व्यक्तिले पनि खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्री प्रदान गरेका छन् । बिहीबार राहत सामग्री सहित गृहमन्त्री सवार नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मौसम खराबीका कारण बीचबाटै फर्केको थियो । आज पुनः नेपाली सेनाकै हेलिकप्टरबाट गृहमन्त्री सहितको टोली राहत लिएर ढोरपाटन पुगेको हो ।
बुधबार राति भुजीखोलामा आएको बा’ढीका कारण ढोरपाटन नगरपालिका–९, ८ र ७ मा ठूलो धनजनको क्ष’ति भएको छ । सबै भन्दा बढी वडा नं. ९ प्रभावित छ । बाढीमा बे’पत्ता भएका १४ जनाको श,व फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । भेटिएका श,व मध्ये चार जनाको मात्र सनाखत भएको छ । बाढीमा बे’पत्ता भएकाको सङ्ख्या अझै यकिन छैन । खोजी र उ’द्धार कार्य जारी रहेको बुर्तिबाङ इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक प्रकाशसिँह भण्डारीले बताए ।-रासस
Previous articleभर्खरै बच्चाको बाबू बारे पहिलो पटक मुख खोलिन,बल्ल पत्ता लाग्यो बच्चाको बाबू,आखिर छोरा निर्दोस रहेछन
Next articleआमा छोरा बिच फोनमा भएको कुराकानीको कल रेकर्ड यस्तो! मेरो पेटमा तेरो बच्चा छ,अब के गर्ने?Aama Chhora